အခြားရောဂါများ Archives - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Dietary guidelines to be followed after kidney transplantation
“ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမူခံယူပြီးနောက် လိုက်နာရမည့်စားသောက်ပုံစံများ” လူရောစိတ်ပါကြံခိုင်မှုရှိခဲ့လို့ ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှုကို ခံယူခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ခွဲစိတ်မှုပြီးတဲ့နောက် နေထိုင်ပြုမှု စားသောက်မှုပုံစံများက သာမန်လူများကဲ့သို့ ကျန်းကျန်းမာမာသွားမလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှုခံယူထားသူများအနေဖြင့် စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်းပူပန်မှုများက အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတတ် ကြပါတယ်၊များသောအားဖြင့် နှစ်မျိုးတွေ့ရပါတယ်၊တစ်မျိုးမှာ မိမိ၏အစားထိုးထားသော ကျောက်ကပ်လေးပျက်စီးသွားမှာစိုး သဖြင့်အစားအသောက်များကို…
အရက်သောက်မှ အသည်း အဆီဖုံးတာလား?
အရက်သောက်မှ အသည်း အဆီဖုံးတာလား? ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသည်းအဆီဖုံးနေတဲ့ လူဦးရေမှာ လူသုံးယောက်မှာတစ်ယောက်ခန့်တွေ့ရတတ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးအရက်သောက်သုံးသူများတွင်တွေ့ရသော အသည်းအဆီဖုံးခြင်း(Fatty Livers)သာမက အရက်ကြောင့် မဟုတ်တဲ့ အသည်းအဆီဖုံးခြင်း(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease/NAFLD)ဆိုပြီးတွေရတတ်ပါတယ်။ အသည်းအဆီဖုံးခြင်းဆိုသည်မှာ အသည်းဆဲလ်ထဲရှိအဆီပမာဏမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်သည်ထက်ပိုမိုများပြားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းအဆီဖုံးခြင်းမှတစ်ဆင့် အသည်းရောင်ခြင်း အသည်ခြောက်ခြင်းနှင့်…